Degso VLC Media Player loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (40.70 MB)
Degso VLC Media Player,
VLC Media Player, oo badanaa loo yaqaan VLC isticmaalayaasha kombiyuutarka, waa ciyaariyahan warbaahin oo bilaash ah oo loogu talagalay inaad ku ciyaarto dhammaan noocyada feylasha warbaahinta kombiyuutaradaada dhibaato laaan.
Soo Degso VLC Player - Free Media Player
Taageerida ku dhowaad dhammaan kordhinta feylasha ee fiidiyowga iyo fiidiyowga labadaba, VLC waxay kujirtaa kaalinta koowaad ee doorbidaha qalabka warbaahinta ee isticmaaleyaal kombiyuutar badan xitaa qaabkan kali ah.
Haysashada rakibid nadiif ah, VLC Player waxay ku siineysaa fursado badan oo kala duwan xitaa inta lagu jiro rakibidda. Waad dooran kartaa dhammaan faylalka kordhinta ee aad rabto inaad ku ciyaarto VLC inta lagu jiro rakibidda, sidaas darteed waxaad ku ciyaari kartaa faylasha warbaahinta oo leh faylka kordhinta ee aad ku qeexday VLC inuu yahay ciyaaryahanka warbaahinta ee caadiga ah.
VLC Player, oo leh interface isticmaale fudud oo la fahmi karo oo si fudud ay u isticmaali karaan isticmaalayaasha kombiyuutarka ee heerarka oo dhan, ayaa si buuxda diiradda u saaray ciyaarida faylasha warbaahinta. Barnaamijka, oo bixiya xalka aadka u horumarsan ee wax ku oolka ah ee isticmaalayaasha kombuyuutarrada ujeeddadiisu tahay inay u ciyaaraan feylasha warbaahinta si habsami leh oo dhaqso leh, ayaa ku guuleystey inuu dhaafo qaar badan oo ka mid ah tartamayaasha suuqa.
Intaas waxaa sii dheer, waxaad si fudud uheli kartaa xulashooyinka kaladuwan ee kaladuwan ee loogu talagalay barnaamijka softiweerka ah, kaas oo bixiya taageero mawduuc u ah isticmaaleyaasha ku caajisey isku xirnaanta adeegsadaha VLC Media Player, bogga horumariyaha, waxaadna bilaabi kartaa adeegsiga mawduucyada aad jeceshahay adigoo soo dejinaya iyaga kombiyuutarkaaga.
VLC Media Player, oo siisa isticmaaleyaasha xulashooyin kala-soocid badan oo kala duwan iyo dejin horumarsan marka laga reebo taageerada mawduuca, waxay isku dayeysaa inay ku siiso wax aad uga badan inta aad ka fileysid ciyaartoyga warbaahinta, sida ugu fudud ee suurtogalka ah.
Caawinta barnaamijka, oo waliba ku siinaya macluumaad badan oo kala duwan oo ku saabsan fiidiyowga ama faylasha maqalka ah ee aad ciyaarayso xilligaas, sidoo kale waxaad fursad u leedahay inaad ku duubato maqal ama muuqaal haddii aad rabto. Caawinta barnaamijka, oo aad kala socon kartid maqal ama muuqaallo fiidiyoow ah oo laga baahiyo ilo kala duwan oo khadka tooska ah ah, waad keydin kartaa waxyaabaha aad daawaneysid ama dhageysaneysid kombuyuutarkaaga, ka dibna u fiirso ama u dhageyso mar kale iyo mar kale haddii aad rabto.
Saamaynta iyo dejimaha kala duwan ee aad u adeegsan karto si aad u kordhisid tayada fiidiyowyada aad daawanayso ama muusikada aad dhegeysanayso ayaa iyaguna ka mid ah barakooyinka lagaa siiyay VLC Media Player. Barbaraha 12-kanal iyo dejimaha dhawaaqa fiican iyo saamaynta kuu oggolaan doonta inaad dareento naftaada deegaanno kala duwan ayaa iyaduna kugu sugaysa VLC.
Marka laga reebo kuwan oo dhan, VLC waxay sidoo kale bixisaa xulashooyin sida goynta, midabaynta, ku darida biyo-biyoodka, ku dabaqida xulashooyinka shaandhaynta horumarsan ee fiidiyowyada, iyo iswaafajinta udhaxeysa maqalka iyo muuqaalka iyo taageerada cinwaan sare.
Markaad tixgelinayso dhammaan astaamahan horumarsan ee VLC Media Player leeyahay, waa shaki laaan inuu yahay kan ugu wanaagsan uguna horumarsan warbaahinta suuqa. Interface interface A customizable, hawlaha aad u fiican ee aad isticmaali karto, fududahay in la isticmaalo, audio iyo video qaab taageero heer sare ah iyo in ka badan oo kale ayaa kugu sugaya VLC Media Player.
Bixinta xalal dhexdhexaadin ah oo la isku habeyn karo.
Ku sii wadida horumarkiisa il furan.
Kala soocida menu-ka Settings oo loo yaqaan Simple and Advanced.
Awood u leh inuu akhriyo dhammaan qaabab maqal iyo muuqaal ah.
VLC Media Player Noocyada
Cabirka Faylka: 40.70 MB
Horumar: VideoLan Team